Android ဖုန်းတွေ မကြာခဏ Hangနေရခြင်း ~ The ICT.com.mm Blog
Android ဖုန်းတွေ မကြာခဏ Hangနေရခြင်း
ဖုန်းတွေ ဘာလို့ မကြာခဏ Hangနေရတာလဲဆိုတာ အကြောင်းအရင်း များစွာ ရှိပါတယ်။ CPU နိမ့်နေတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ဆုံး အခြေအနေကတော့ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Built-in Memoryလို့ ခေါ်တဲ့ Memory ပမာဏနည်းတဲ့ ဖုန်းတွေက ပို Hangတတ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Built-in Memoryနည်းတဲ့ ဖုန်းတွေက ပိုHangတာလဲ?
Built-in Memory နည်းတဲ့ဖုန်းတွေက CPU နည်းပါတယ်။ Built-in Memoryက နည်းနေတဲ့အတွက် External Memory ထပ်ထည့်ရပါ တယ်။ External Memory 8GB, Built-in Memoryက 125 MB ရှိနေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဟာ မကြာခဏ Hangနေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားတဲ့ Applicationတွေ များနေတယ်။ Built-in Memory ရှိသလောက်ကို Applicationတွေ သွင်းထားတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက External Memory 8GBကို 7GBလောက် Dataတွေ ထည့်ထားတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိူးမှာ ဖုန်းက OSကိုလဲ Runနေရတယ်။ တစ်ခြား Applicationတွေကိုလဲ Runနေရတဲ့အတွက် သူလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ တစ်ခါတလေ Hangတတ်ပါတယ်။
Built-in Memoryနည်းတဲ့ ဖုန်းတွေကို အဲ့လို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ရှင်းပါတယ်၊ သူလုပ်နိုင်သလောက် တာ၀န်ကိုပဲ လုပ်ခိုင်းပါ။ CPU နည်းတဲ့အတွက် သူရဲ့အလုပ် လုပ်နိုင်စွမ်းလည်း နည်းပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးက Built-in Memory 125 MB, CPU 800 MHz ရှိတယ် ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီ Memoryက Android Osရဲ့ Data ပမာဏကို နုတ်ပြီး လက်ကျန် Memory ဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုထဲက Memory နည်းနေတဲ့အတွက် Application အများကြီး သွင်းလို့ မရပါဘူး။ ဖုန်းထုတ်တဲ့ လူတွေက ဒါကို တွက်ချက် ပေးပြီးသားပါ။ Applicationတွေကို အစကတည်းက လိုအပ်သလောက် ထည့်ပေးပြီးသားပါ။ User လက်ထဲရောက်မှာသာ စိတ်ကြိုက် Application ထည့်လို့ရအောင် Memory ချန်ပေးထားတာပါ။ Built-in Memoryပေါ်မှာ Android Osကလဲ အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ Applicationတွေကလဲ အလုပ် လုပ်နေပါတယ်။ Built-in Memory နည်းတဲ့ ဖုန်းတွေကို External Memory တတ်နိုင်သမျှ အများဆုံး ထည့်ပါ။ Applicationတွေ လိုအပ်သလောက်ပဲ ထည့်ပါ။ ဂိမ်းကို အချိန် ကြာမြင့်အောင် မဆော့ပါနဲ့။ Recentတွေကို ဖျက်ပေးပါ။ Call Logတွေ အများကြီး သိမ်းမထားပါနဲ့ ဖျက်လိုက်ပါ။ တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် ဖုန်းကို Restart လုပ်ပေးပါ။ ဖုန်းဖွင့်ထားဖို့ မလိုအပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ဖုန်းကို ခဏ ပိတ်ထားပါ။ ဖုန်းဆိုတာ ကွန်ပျူတာထက် အလုပ် ပိုလုပ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက အလုပ်လုပ်ပြီးရင် ပိတ််တဲ့အချိန်တွေ ရှိိပါတယ်။ ဖုန်းကို Power ပိတ်တဲ့အချိန်က နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ အနားပေးသင့်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းဆိုတာ လူတွေနဲ့ အတူညီဆုံး ပုံစံတွေယူပြီး တီထွင်ထားတာပါ။ သူတို့လဲ လူတွေလို အနားပေးသင့်ပါတယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းထက် ပိုလာရင် ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖုန်း မကြာခဏ Hangနေတယ်ဆိုတဲ့ Errorကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။
Android, Game, Hang
Newer ကွန်ပျူတာ ပါဝါဖွင့်ထားပြီး Windows မတက်သော Error ဖြေရှင်းနည်း
Older ဘဝ နေဝင်ချိန်လေးများ လှပစေချင်
One thought on “Android ဖုန်းတွေ မကြာခဏ Hangနေရခြင်း”